Thai News – Taung Gyi
2022 ရဲ့အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံးထိုင်းမင်းသမီး(၁၀)ယောက် 1. Aum Patchrapa အနုပညာလောကထဲမှာနှစ်(၂၀)ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပီးနောက်Aum Patchrapa ဟာအောင်မြင်မှုတွေအမြဲတမ်းရရှိနေသူပါ။သတင်းအရသူမကိုAnanda Everingham နဲ့အတူ“Tid Noi 2565” movie မှာတွေ့ရမှာပါ။ 200,000 Baht / episode 15 million Baht / commercial 300,000 / event 2. Chompoo Araya Chompoo …
2022 ရဲ့အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံးထိုင်းမင်းသမီး(၁၀)ယောက် Read More
ကိုးရီးယားမင်းသားGong Yoo ကိုချစ်ခင်လေးစားကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ထိပ်တန်းထိုင်းမင်းသမီးများ Aff Taksaorn မနှစ်ကနှစ်ကုန်ခါနီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာAff Taksaorn ကGong Yoo ဟာသူမရဲ့ideal type ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့IG မှာလဲGong Yoo ကိုfollow ထားပါတယ်။ Anne Thongprasom နာမည်ကြီးTV show ဖြစ်တဲ့‘3 Zaap’ မှာAnne Thongprasom ကသူမဟာGong Yoo ကိုချစ်ခင်လေးစားကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူကိုလဲGong Yoo ရဲ့ဆံပင်ပုံစံပြောင်းဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Baifern Pimchanok …
ကိုးရီးယားမင်းသားGong Yoo ကိုချစ်ခင်လေးစားကြောင်းထုတ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ထိပ်တန်းထိုင်းမင်းသမီးများ Read More
ထိပ်တန်းထိုင်းTV3 မင်းသမီးတွေရဲ့2022 အတွင်းထွက်ရှိလာမဲ့Movie အသစ်များ
ထိပ်တန်းထိုင်းTV3 မင်းသမီးတွေရဲ့2022 အတွင်းထွက်ရှိလာမဲ့Movie အသစ်များ Drama တွေအပြင်ဒီThai TV3 မင်းသမီးတွေဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာMovie တွေနဲ့လဲFan တွေရှေ့ပြန်လာဦးမှာပါ။ Taew Natapohn သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာတင်မဟုတ်ပဲအဆိုနဲ့အကမှာပါTalent ရှိတဲ့Taew Natapohn ကတော့သူမရဲ့ဒုတိယမြောက်သီချင်းဖြစ်တဲ့“100%” ကိုမကြာခင်ကထုတ်ထားပီးကောင်းမွန်တဲ့feedback တွေရရှိနေပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲသူမရဲ့Movie အသစ်ဖြစ်တဲ့ “Six Characters” ကိုဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်မှာစတင်ရုံတင်သွားမှာပါ။ Bella Ranee Bella Ranee ဟာသူမရဲ့အကောင်းဆုံးco-star ဖြစ်တဲ့Pope Thanawat နဲ့အတူ“Love …
ထိပ်တန်းထိုင်းTV3 မင်းသမီးတွေရဲ့2022 အတွင်းထွက်ရှိလာမဲ့Movie အသစ်များ Read More